Barnaamijka Tubta Toosan talo ka dhiibo-DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Barnaamijka Tubta Toosan talo ka dhiibo-DHAGEYSO
Published on June 4, 2013 by Cilmi Waare · 1 Comment · 3,885 views
Barnaamijka Tubta saddexdii sano ee la soo dhaafay waxaan uga hadalnay arrimo ku saabsan dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida iyo fahamka saxda ah ee Diinta Islaamka.
Culimo Soomaaliyeed ayaa ka qeyb galay faahfaahinta qodobbo ay ka mid ahaayeen waxa ay shareecadu ka qabto, Dilka dadka aan waxba galabsan, Qaraxyada, Gaalaysiinta dadka, Sifooyinka Khawaarijta, Xuquuqda Aadanaha iyo kuwo kale.TUBTA 03 06 2013
Sidoo kale aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa barnaamijkaan uga hadlay qodobbo ay ku jireen dowlad-wanaagga, Dowrka Darstuurka iyo sugidda amniga, ayadoo dadku ay su’aalo iyo aragtiyo ku soo gudbinayeen.
Haddaba sidee kuu sameeyay barnaamijkani, maxaad ku talinaysaa in lagu soo kordhiyo ama laga bedelo, Taladaada noogu soo dir E-mailka: Tubta3@gmail.com, haddii aan Taleefankaaga noo soo dirto waan ku soo wici doonaa si aad barnaamijka aragtidaada uga dhiibato si toos ah.
Qeybtii xalay ee barnaamijka oo ku saabsan aragtida ay dadku ka qabaan oo uuna ka qeyb galay Sheekh C/llaahi Axmed Garuun, ka dhageyso qeybta hoose.
TUBTA 03 06 2013
shiiq suheeb says:	June 10, 2013 at 6:32 pm	waa kufaraxsanahay wacdigilinta aad umadasoomaaliyeed wacdi giliseen dilka waa qabrigii qaloocnaa qoryihii kahoos qabiil sheegameeynee qaran ayaa rabnaa dowlada soomaliya mid lagu nasto alaha kadhigo sweden linköping xaafada waa taas